January 2020 - Myitter
အိမ်မွေးတိရစ်ဆာန်များမှာလည်း ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနိုင်ဟု ပညာရှင်များ သတိပေးလိုက်ပြီနော်
January 31, 2020 Myitter 0
အိမ်မွေးတိရစ်ဆာန်များမှာလည်း ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနိုင်ဟု ပညာရှင်များ သတိပေးလိုက်ပြီနော် ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အခြားတိရစ်ဆာန်တွေမှာလည်း ရှိနေနိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အိမ်မွေးတိရစ်ဆာန်လေးတွေမှာ ရှိနေတယ်ဆိုပါက လူတွေကိုလည်း ကူးစက်ခံရနိုင်တယ်လို့ သတိပေးခဲ့တာပါ။ တရုတ်ပြည်တွင်း ကျန်းမာရေးကော်မရှင်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပ ရောဂါရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၊ ဒေါက်တာ Li Lanjuan က ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ […]
ထီပေါက်ရင် ထီ ရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာ သွားထုတ်ရပါမယ် ဘာတွေ ထည့်သွားရမလည်း ဆိုတော့
တကယ်လို့ …. ထီပေါက်ခဲ့ရင် ထီရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာ သွားထုတ်ရပါမယ် ဘာတွေ ထည့်သွားရမလည်း ဆိုတော့ …. ထီပေါက်ရင် ထီ ရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာ သွားထုတ်ရပါမယ် ဘာတွေ ထည့်သွားရမလည်း ဆိုတော့ 1. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း နဲ့ မိတ္တူ 2. မှတ်ပုံတင်မူရင်း […]
ပြည်သူတွေကို အခမဲ့ဝေပေးဖို့ Mask ၂သန်းခွဲ ပြုလုပ်နေတဲ့ စင်္ကာပူစစ်သားတွေရဲ့ ဗီဒီယိုထုတ်ပြန်
CNA ရဲ့သတငျးအရ မနကျဖနျ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ရကျနမှော စင်ျကာပူပွညျသူတှကေို Mask ၂သနျးခှဲအခမဲ့ဖွနျ့ဝဖေို့ Mask တှထေုတျပိုးနကွေတဲ့ စင်ျကာပူစဈသား ၁၅၀၀ခနျ့ရဲ့ ဗီဒီယိုကို အစိုးရကထုတျပွနျလိုကျပါတယျ။ လောလောဆယျ စင်ျကာပူနိုငျငံမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရဗျဈကူးစကျခံရသူ ၁၃ ဦးအထိရှိနပွေီဖွဈပွီး အထူးကူသဆောငျမှာ ကွပျမတျကုသနသေလို အခွားသံသယရှိတဲ့တဲ့လူတှကေိုလဲစောငျ့ကွညျ့နတေယျလို့သိရပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ကွီး WHO ကလဲ […]
ရန်ကုန် မန္တလေး မိတ္တီလာနှင့် မူဆယ်မြို့များတွင် ၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သံသယ လူနာများ တွေ့ရှိထား
ရန်ကုန် မန္တလေး မိတ္တီလာနှင့် မူဆယ်မြို့များတွင် ၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သံသယ လူနာများ တွေ့ရှိထား ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မိတ္တီလာနှင့် မူဆယ်မြို့များတွင် ၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သံသယ လူနာ ၃ ဦး တွေ့ရှိထားပြီး လတ်တလော စောင့်ကြည့် ဆေးကုသမှုများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ကျ အရာရှိများထံမှ […]
မြန်မာပြည်ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ဒီစာကို ဖတ်ထားပြီး လိုက်နာကြပါ
အိန်ဒိယသမ်မတ ပွောသှားတဲ့ “မငျးရဲ့နိုငျငံအတှကျ အခြိနျ ၁၀ မိနဈလောကျ ပေးနိုငျမလား´´တဲ့ ပေးနိုငျရငျ ဒီစာလေးကို ဖတျကွညျ့ပါ မွနျမာနိုငျငံက လူတှအေတှကျ လညျးတိုကျဆိုငျလှနျးလို့ သူငယျခငျြးတို့အခြိနျယူပွီး ဖတျစခေငျြတယျ။ အခြိနျနညျးနညျးပေးပွီး ဖတျပေးပါ။ ဒီစာကို ဖတျ ပွီးသှားရငျ သူငယျခငျြးတို့ရဲ့ စိတျထဲမှာ ကိုယျ့တိုငျးပွညျအတှကျ ငါတို့ဟာ တိုငျးပွညျရဲ့ […]
ဝူဟနျသံသယရှိသူကို ဝဘောဂီဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျတာနဲ့ပတျသကျပွီး မေးခှနျးထုတျလိုကျတဲ့ အသေငျခြိုဆှေ
ဝူဟနျသံသယရှိသူကို ဝဘောဂီဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျတာနဲ့ပတျသကျပွီး မေးခှနျးထုတျလိုကျတဲ့ အသေငျခြိုဆှေ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ကွီး(WHO)က ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈကို နိုငျငံတကာကနျြးမာရေးအရေးပျေါအခွအေနအေဖွဈ ကွညောလိုကျတဲ့ ဒီနမေ့နကျမှာပဲ ရနျကုနျမွို့ အပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျမှာ ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈသံသယရှိသူတဈယောကျကို တှရှေိ့ခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ထိုခရီးသညျဟာ တရုတျတောငျပိုငျး လကွေောငျးလိုငျးဖွငျ့ ကှမျကြိုးမှ ရနျကုနျသို့ ပြံသနျးလာသော လယောဉျပျေါမှာ လိုကျပါစီးနငျးလာပွီး ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈသံသယရှိရတာမို့ ရနျကုနျ […]
ဓာတ်ခွဲခန်း မှာ လိုအပ် တဲ့ ပစ္စည်းတွေ မရှိသေးလို့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မစစ်ဆေးနိုင်သေးဘူးလို့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးပြော…….
ဓာတျခှဲခနျးမှာ လိုအပျတဲ့ပစ်စညျးတှေ မရှိသေးလို့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ မစဈဆေးနိုငျသေးဘူးလို့တာဝနျရှိသူတဈဦးပွော အမြိုးသားကနျြးမာရေး ဓာတျခှဲခနျးမှာ လိုအပျတဲ့ ဓာတျခှဲမယျ့ပစ်စညျးတှမေရှိသေးလို့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ မစဈဆေးနိုငျသေးဘူးလို့ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ တာဝနျရှိသူကပွောပါတယျ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုး သံသယလူနာတှရေ့ငျ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ WHO ရဲ့အကူအညီနဲ့ ထိုငျးနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ဓာတျခှဲခနျးမှာ ရလဒျကိစဈျဆေးဖို့လုပျရမယျလို့ တာဝနျရှိသူတဈဦီးကပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ နောကျဆုံးရရှိထားတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှအေရ ကိုရိုနာဗိုငျးရဗျဈကွောငျ့ […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သံသယလူနာ ပါလာသည့် လေယာဉ်ပေါ်ရှိ ခရီးသည် ၇၉ ဦးအနက် မြန်မာနိုင်ငံသား နှစ်ဦးကိုသာ ခေါ်ယူထားပြီး ကျန်ခရီးသည်များအား ယင်းလေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်စေလွှတ်မည်ဟုဆို
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သံသယလူနာ ပါလာသည့် လေယာဉ်ပေါ်ရှိ ခရီးသည် ၇၉ ဦးအနက် မြန်မာနိုင်ငံသား နှစ်ဦးကိုသာ ခေါ်ယူထားပြီး ကျန်ခရီးသည်များအား ယင်းလေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်စေလွှတ်မည်ဟုဆို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သံသယလူနာ လိုက်ပါလာသည့် လေယာဉ်ပေါ်ရှိ ခရီးသည် ၇၉ ဦးအနက် မြန်မာနိုင်ငံသား နှစ်ဦးကိုသာ ခေါ်ယူထားမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ခရီးသည်များအား ယင်းလေယာဉ်ဖြင့် […]
ကိုရိုနာဗိုင်ရပ် သံသယရှိသူတစ်ဦးတွေ့ ကျန်ခရီးသည်များကို လေယာဉ်ပေါ်တွင် ဆက်လက်ထား
#Breaking #News ယနေ့ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်နေ့တွင် တရုတ်တောင်ပိုင်း လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ကွမ်ကျိုးမှ ရန်ကုန်သို့ ပျံသန်းလာသော လေယာဉ်ပေါ်၌ ဖျားနာသောလူနာတစ်ဦးပါလာကြောင်း လေယာဉ်မှူးမှ လေကြောင်းထိန်း မျှော်စင်သို့ အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါလူနာကို လေယာဉ်ပေါ်မှ မဆင်းခိုင်းဘဲ လေဆိပ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က လေ ယာဉ်ပေါ်တွင် တက်ရောက်ပြီး […]
မြစ်​ကြီးနား မန္တလေး ၅၆ အစုံရထားပေါ်တွင်​ လူတစ်​ဦးရုတ်​တရက်​သေဆုံး
မြစ်​ကြီးနား မန္တလေး ၅၆ အစုံရထားပေါ်တွင်​ လူတစ်​ဦးရုတ်​တရက်​သေဆုံး 30.1.2020 ရက်​ ဇန်​နဝါရီလ ၃၀ ရက်​နေ့ည တွင်​ မြစ်​ကြီးနား မှ မန္တလေး အသွား အထူးအမြန်​ရထားပေါ်တွင်​ ပါလာသော လူတစ်​ဦးရုတ်​တရက်​သေဆုံ သွားပါသည်​ သေဆုံးသွားသော Dead Body အား ည ၈နာရီ […]